» मौसमी फ्लू र कोरोनाको लक्षण यसरी छुट्याउन सकिन्छ
मौसमी फ्लू र कोरोनाको लक्षण यसरी छुट्याउन सकिन्छ
डा. दीपक सिग्देल
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०७:३५
फाेटाे : काेशी अनलाइन
बिराटनगर : संक्रामक रोगहरू मौसमअनुसार बढ्ने हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम जाडो महिनामा झन् बढेको छ ।
मौसम परिवर्तन भएको छ । प्रत्येक वर्ष मौसम परिवर्तन हुँदा अधिकांश मानिसलाई रुघाखोकी वा मौसमी फ्लूले सताइरहेको हुन्छ ।
समुदायमा कोरोना संक्रमण भयावह रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा सामान्य रुघाखोकी तथा ज्वरो आउँदा पनि कोभिडको संक्रमण पो हो कि भन्ने त्रास बढेको छ ।
कोरोना भाइरसको लक्षण पनि अन्य फ्लुसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले मानिसलाई संक्रमित भएकोजस्तो शंका लाग्नु स्वभाविक हो ।
(सिनियर फिजिसियन, कोशी अस्पताल)
मौसम परिवर्तनका कारण धेरैजसोलाई सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो देखिन सुरु पनि भइसकेको छ ।
फ्लू र कोरोनाको लक्षण एउटै प्रकृतिको हुने भएकाले यसले भ्रममा पार्न सक्छ । तर, रुघाखोकीका लक्षण र कोभिडका कारण देखापर्ने लक्षण मिल्दोजुल्दो भए पनि यी दुईमा देखिने केही फरक लक्षणका कारण फरक छुट्याउन सकिन्छ ।
ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, थकान, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, झाडापखाला हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद तथा गन्ध हराउने कोभिडको संक्रमण भएका कारण देखापर्ने लक्षण हुन् ।
जुन धेरैथोरै सामान्य मौसमी फ्लूसँग मिल्दोजुल्दो छन् । कोभिडको संक्रमणका कारण स्वाद र गन्ध हराउनु सामान्य हो । तर फ्लु हुँदा स्वाद र गन्ध हराउँदैन ।
सामान्य फ्लू वा मौसमी रुघाखोकी लाग्दा धेरै हाच्छ्युँ आउने हुन्छ भने कोरोनाको संक्रमणमा एकदम कम हाच्छ्युँ आउने वा हाच्छ्युँ नै नआउने हुन्छ । साथै, सामान्य फ्लू हुँदा झाडापखाला हुने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ ।
सामान्य फ्लू हुँदा पनि जिउ दुख्ने तथा थकानले सताउन सक्छ । तर, दुबैको तुलना गर्दा कोभिडका कारण भएको थकान सामान्य फ्लूभन्दा धेरै हुन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण हुँदा र मौसमी फ्लू हुँदा घाँटी खसखस हुने, घाँटी दुख्ने, थकान वा जिउ दुख्छ । तर, सामान्य फ्लू वा मौसमी रुघाखोकी लागेमा हाच्छिउ आउने, घाँटी दुख्ने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, शरीर दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने, टाउको दुख्नेजस्ता लक्षण बढी देखा पर्छ भने कोरोनाको संक्रमणमा सुख्खा खोकी लाग्ने, स्वाद र गन्ध बिस्तारै हराउँदै जाने, १०० वा सोभन्दा धेरै ज्वरो, एकदम जिउ दुख्ने वा थकान धेरै हुन्छ ।
अहिलेको मौसमी रुघाखोकीको समय पनि हो । यस्तो बेला सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउनु स्वाभाविक हो । तर, मौसम परिवर्तन भइरहेका कारणले रुघाखोकी वा सामान्य ज्वरो देखा पर्दासमेत पीसीआर परीक्षण गर्नुबाहेकको विकल्प छैन ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण हो वा अन्य कुनै भाइरल ज्वरो हो भनेर छुट्याउनका लागि पीसीआर परीक्षण नै गर्नु पर्ने हुन्छ । कोभिडको संक्रमण, सामान्य मौसमी फ्लूजस्तै नै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने भएको हुँदा संक्रमणबाट बच्न सुरक्षित रहन तथा सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।
(कोशी अस्पतालका सिनियर फिजिसियन डा. सिग्देलसँग अंकिता ताम्राकारले गरेको कुराकानीमा आधारित)
काेशी अनलाइनबाट साभार